आफ्ना देशको जनताको सहयोगमा जुट्दैछन् भारतिय कलाकार, नेपाली कलाकार भने सधैं गु्मनाम !
कोरोनाभाइरसको दोश्रो लहरमा प्रभावित व्यक्तिहरुको लागि बलिउडका कलाकारहरुले उल्लेखनिय तदारुकता देखाईरहेका छन्। अहिलेसम्म अक्षय कुमार, अजय देवगन, सुनील शेट्टीलगायत कलाकारहरुले विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरुसँग मिलेर सहयोगकार्यहरु गरिरहेका छन्।
अमेरीकामा बस्दै आएकी अभिनेत्री प्रियंका चोपडा पनि त्यहिबाट संक्रमितहरुको सहयोगमा जुटेकी छन्। यसैविच प्रियंकाका श्रीमान निक जोनसले पनि भारतको लागि सहयोग जुटाउन पहलकदमी शुरु गरेका छन्। निक गायक तथा अभिनेता हुन्।
प्रियंकाले आफ्नो फाउंडेशनको तर्फबाट कोरोना पिडीतहरुको मदतको लागि ‘गिव इंडिया’ नाम गरेको एउटा अनलाइन फण्ड रेजिङ अभियान शुरु गरेकी छन्, जसमा उनले आर्थिक सहयोगके लागि अपिल गरेकी छन्। निकले यहि लि.क शेयर गरेर लेखेका छन्, ‘भारतलाई हाम्रो आवश्यकता छ, जे सम्भव छ दिनुहोला।’
भारतिय कलाकारहरु आफ्ना देशका नागरिकको मदतमा लागि विभिन्न माध्यमबाट अघि आएका छन्। कोहि अक्सिजन जुटाउन लागिपरेका छन् भने कोहि भेन्टिलेटर बनाउन जुटेका छन्। कलाकार सोनु सुदले त सहयोगका लागि मोबाईल एप नै बनाएर जारी गरेका छन्। अन्य थुप्रै कलाकारहरुले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सहयोग जुटाईरहेका छन्।
नेपालमा पनि पछिल्लो समय कोरोनाको महामारी तिव्र गतीमा फैलिरहेको छ। दिनप्रतिदिन संक्रमीतहरुको संख्या बढीरहेको छ भने बिरामीहरुले आईसियू नपाउने अवस्था आईसकेको छ। तर, नेपालका कलाकारहरु भने यस्तो अवस्थामा जनता र राज्यको मदतका लागि उल्लेखनिय रुपमा अगाडी आउन सकेका छैनन्।
यस महामारीको घडिमा नेपालका प्रायजसो सबै कलाकारहरु गुमानाम अवस्थामा छन्। नेपाली कलाकरहरुले सामाजिक सञ्जालबाट सचेतना सन्देश बाढ्नेबाहेक खासै केहि गरेका छैनन्। नेपाली कलाकारहरुको यो रवैया आलोचित हुँदै आएको छ।
#बलिउड #काेराेना माहामारी #कलिउड #सहयाेग #कलाकार
प्रकाशित मिति: बिहीबार, वैशाख १६, २०७८ १७:१३
बुधबार, साउन २०, २०७८ १३:०० तीन हजार शरणार्थीलाई खोप
बुधबार, साउन २०, २०७८ १२:५५ जसपाको मुद्धा ‘लगाउ’ मा राख्न सर्वोच्चको आदेश
बुधबार, साउन २०, २०७८ १२:४७ शुक्रबारदेखि भेरोसेलको दोस्रो मात्रा दिइने
बुधबार, साउन २०, २०७८ १२:३७ बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै
बुधबार, साउन २०, २०७८ ०७:२६ २ चुट्किला पढ्नुस्, माइन्ड फ्रेस गर्नुस् !
बुधबार, साउन २०, २०७८ ०७:०८ पढ्नुस्, १० विद्धानका यी १० प्रेरक भनाइ, जसले तपाईंको सोच बदल्छ
जसपाको मुद्धा ‘लगाउ’ मा राख्न सर्वोच्चको आदेश
शुक्रबारदेखि भेरोसेलको दोस्रो मात्रा दिइने